European Commission ichapa mibairo yekuvandudza chengetedzo muVLC mutambi | Linux Vakapindwa muropa
European Commission ichapa mibairo yekuvandudza chengetedzo muVLC mutambi
VLC yave imwe yeanonyanya kufarirwa, anotendeuka uye ane simba multimedia vatambi kuti vakwanise kutamba mhando dzese dzemafomati, kunyangwe kana vamwe vatambi vasingakwanise neimwe codec, ingangoita ne VLC unogona kutamba mavhidhiyo akasindimara. Iyo zvakare yemahara uye inowanikwa kune akasiyana masisitimu anoshanda, pakati payo pasina mubvunzo GNU / Linux uye zvakare yeApple. Kana iwe usati uchizviziva, ini ndinokurudzira kuti iwe uzviedze uye utarise iyo yepamutemo webhusaiti.
Zvakanaka ikozvino isu takazviziva izvozvo European Commission inoda kuisa mari muchimiro chemubairo kune chero munhu anogona kuvandudza chengetedzo yeanobudirira midhiya mutambi. Gore risati rapera, EC yakazivisa danho rayo rekutanga remubairo rekuvandudza uye kuongorora chengetedzo mune yakavhurika sosi uye yemahara software mapurojekiti (FOSSA). Kana iwe uri mumwe weavo vakaona mamwe matambudziko ezvekuchengetedza kana kusagadzikana, unogona kuvaudza kuti vawane mibairo iyoyo.
Mari yakapihwa inotanga pamadhora zana ekutaurisa zvikanganiso zvakadzama kusvika $ 2000 kana kushomeka kwaunomhan'ara kwakakosha. Naizvozvo, haasi iwo manhamba asingatarisirwe atinogona kukunda. Kuti tikwanise ivo, chokwadika, isu tinofanirwa kuona dambudziko rekuchengetedza muVLC Media Player tozvizivisa kune uyu mumwe link. Zviripachena kuti bhajeti yavanayo haina muganhu, nekuti vane € 60.000 yekugovera pakati pevashandi.
Ichokwadi ndechekuti ichi hachisi chinhu chitsva munyika yekomputa yekuchengetedza, yakawanda mibairo yezvehupfumi inopihwa kune avo vanokwanisa kuwana kusagadzikana mune mamwe mapurojekiti, sezvakaitikawo ne OpenSSL. Uye manejimendi mazhinji ehurumende, uye European Commission mune ino kesi, vakazvipira kuisa mari kuvandudza mapurojekiti aya anotibata isu tese. Asi zvinosuruvarisa kwete ese makambani anozvitora zvakanaka kana iwe ukavaudza nenjodzi kwavari ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » European Commission ichapa mibairo yekuvandudza chengetedzo muVLC mutambi
Citrix yakaburitsa XenServer 7.3 pamwe nekuvandudza uye kurambidzwa pamusoro peiyo yemahara vhezheni
Spotify ine mutengi nyowani weLinux sechipo chekutanga cheKisimusi